Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. कोरोना भाइरसको त्रास : बिदेशी पर्यटकले धमाधम होटल बुकिङ रद्द गर्दै – Emountain TV
काठमाडौं, २८ माघ । सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सहित २०२० लाई भ्रमण बर्ष घोषणा गरेपनि गएको बर्षभन्दा पर्यटक संख्या न्यून हँुदा पर्यटन व्यवसायी निराश छन् ।
२०१९ को जनवरीको तुलनामा भ्रमण बर्षको जनवरीमा पर्यटक संख्या २ प्रतिशतले घटेको छ । तर नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० सचिवालयले भने बर्षको अन्त्यसम्ममा लक्ष्य पुर्ति हुने दावी गर्दै आएको छ ।
पर्यटकको घँुइचोले अस्तव्यस्त हुने ठमेल बजार यति बेला भने सुनसान देखिन्छ । २० लाख बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहित शुरु भएको भ्रमण बर्ष २०२० को लक्ष्य प्राप्तिमा शंका उब्जाएको छ ।
छिमेकी राष्ट्र चीनमा फैलेको कोरोना भाइरसको त्रासले गर्दा पर्यटकहरुले होटल तथा ट्राभल एण्ड टुर्स कम्पनीका बुकिङहरु समेत रद्द गरेका छन् ।
भ्रमण बर्षका लागि पर्याप्त प्रचारप्रसार हुन नसकेकाले सोचे जति पर्यटक नभित्रिएको पनि पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । सन् २०१९ को जनवरीको तुलनामा भ्रमण बर्ष २०२०को जनवरीमा पर्यटकको संख्या २ प्रतिशतले घटेको छ ।
शुरुवाती तथ्यांकले २०२० मा पर्यटकको संख्या कम देखाएपनि भ्रमण वर्षको अन्त्यसम्ममा लक्ष्य पुरा हुने नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० सचिवालयको दावी छ ।
२० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सहित घोषण गरिएको नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० को सुरुवात सन्तोषजनक भने पक्कै पनि छैन ।
यसमा छिमेकी मुलुकबाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले नकरात्मक प्रभाव पारेको त छ नै । तर देशको पुर्वाधार तथा सुविधाको अवस्था हेर्ने हो भने भ्रमण बर्षको घोषणा हतारमा गरिएको झैँ देखिएको छ ।
बजेट खर्च बढी देखाउन अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गर्‍यो : योजना आयोग
नेपाली बजारमा सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च
आलु र प्याज लोड गरिएको दुई वटा गाडी प्रहरीकाे नियन्त्रणमा
नेपाल आधारभूत खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर भयो त ?